iyo lg stylo 6 iri 'kuuya nekukurumidza' kune t-nhare (uye sprint) pamutengo wakawandisa
Kuru Nhau & Ongororo LG Stylo 6 iri 'kuuya nekukurumidza' kuT-Mobile (uye Sprint) pamutengo wakanyanyisa
LG Stylo 6 iri 'kuuya nekukurumidza' kuT-Mobile (uye Sprint) pamutengo wakanyanyisa
Gadziridza: T-Mobile ine zvakanyatso kufumurwa LG Stylo 6 , ichisimbisa iyo $ 252 FRP (yakazara mutengo wekutengesa) iyo iwe yaunokwanisa kukwanisa kupatsanura muzvikamu makumi maviri nemana zvemwedzi zvemadhora 10.50 ne $ 0 pasi kutanga neChishanu, Chivabvu 29.
Izvo & apos; s zvakare kana iyo yepakati-renji chishandiso chakarongerwa kutanga kutengesa kuSprint, uko iwe & apos; uchabhadhariswa muyero 5 madhora pamwedzi mushure mekubhadhara madhora makumi maviri nemaviri pamberi ... chero bedzi iwe usinga farire kusaina Flex Rease chirongwa ... uye kuva T-Mobile mutengi munguva pfupi . Chekupedzisira asi chisiri chidiki, iyo Stylo 6 yakananga kuMetro neT-Mobile munaJune 10, kwatinotarisira kuti foni ibhadhare zvakanyanya isingasviki mazana maviri nemakumi mashanu emadhora.
Zvinoshamisa kuti, Metro & apos; s poindi yemitengo uye 'zvinopihwa' hazvisati zviri zvepamutemo, izvo zvinoratidza kuti vavhimi vekutenga vangave vari mune kurapwa zvakanyanya mumavhiki mashoma kana zvakadaro. Mushure mezvose, uyu ndiye mumwe chete anobhadharwa opareta ane Apple & apos; s anopenga ane simba yechipiri-gen iPhone SE iri kutengeswa ye $ 99 ine inokodzera nhamba port-in uye hapana imwe tambo dzakabatanidzwa. Yedu yepakutanga nyaya inotevera pazasi.
Iyo sequel kune imwe ye LG & apos; s inonyanya kufarirwa mafoni emafoni e2019 yaive yekutengesa yakaburitswa ine mashoma fanfare pane yayo yekutanga mutakuri weUS svondo rapfuura , uye kunyange T-Mobile hasn & apos; isina kutevedzera sutu yeBoost & apos; izvozvi, iyo Stylo 6 yatove zvakanyorwa pane 'Un-carrier & apos; s' yepamutemo webhusaiti .
Ipo iyo peni-inoshandisa yepakati-ranger isiri chaiyo yekusvikira panguva yekunyorwa kwevatengi veT-Mo, chinyorwa chinyorwa chinoratidza poindi yemutengo weiyo 6.8-inch ruoko. Tichifunga izvi hazvisi zvekungobata chete, zvinoita kunge fungidziro ine musoro, iyo LG Stylo 6 inodhura $ 252 painowanikwa & apos; munguva pfupi. '
Pakutanga kuona, iwo & apos; mutengo mudiki wekubhadhara imwe yeashoma mafoni mafoni pamusika nhasi ine yakavakirwa-mukati stylus uye yepakati-kumagumo zvirevo. Asi kusiyana nevatangiri vayo, iyo LG Stylo 6 iri kusangana nemakwikwi akaomarara akananga kubva kuMoto G Stylus. Izvi hazviwanikwe kuburikidza nenyika & apos; s yechitatu-hombe saiti sevhisi, asi inogona kutengwa chakakiinurwa kubva kune vatengesi senge Best Buy pa $ 300 kana kunyangwe madhora mazana maviri nemakumi maviri nematanhatu epamberi pekutakura.
Zvakafanana munzira dzakawanda, kusanganisira bhatiri kugona, iyo LG Stylo 6 uye Moto G Stylus zvakasiyana zvakanyanya kana zvasvika kune saizi saizi, tekinoroji yekamera, uye kunyangwe kugadzirisa simba. Mukomana mutsva anotamba chiratidziro chakakura kupfuura chakati kurei 6.4-inch Moto G Chinyorwa uchimbundira notch pachinzvimbo chegomba punchi dhizaini inofarirwa nevazhinji vemazuva ano & apos; s anozivikanwa Android mireza.
Iyo 13 + 5 + 5MP katatu lens system kumashure kwe LG Stylo 6 zvakare inotaridzika yakaderera kune iyo 48 + 16 + 2MP yekumusoro-yakatarisana nekamera yekumisikidza inoratidzwa neMoto G Stylus. Iyo $ 252 LG Stylo 6 inorongedza yakaderera 3GB RAM kuverenga uye yakadzikisira 64GB nzvimbo yekuchengetera iyo $ 300 Moto G Stylus, uye kunyangwe isu & apos; tichiri kuita kwedu bvunzo, iyo MediaTek Helio P35 processor inogona kunge ichinonoka kupfuura iyo Qualcomm Snapdragon 665 SoC.
Zvese pane zvese, T-Nhare yaigona kunge yakaita zvirinani maererano neStylo 6 kugona, kunyanya tichifunga zvakafanana foni iri mutengo pa $ 179.99 izvozvi kuBoost Mobile . Ndinovimba, Magenta ichaunza iyo tag pasi pfupi mushure mekuburitsa chaiyo yepakati-renji 6.8-inch hofori. Iyo LG Stylo 6 inoswedera pedyo kusvika gore rapfuura & apos; s $ 186 Stylo 5, zvirinani. Ehezve, kutaura chokwadi, iwo madhivha maviri haatarisike zvakafanana, uye iyo Stylo 6 inounza yakawanda yekuwedzera kukwidziridzwa patafura .
brew link python mvumo yakarambwa
ine s21 ine sd kadhi
google mepu kutyaira modhi ios
Android: maitiro ekugadzira yako foni & apos; s kamera LED flash paunogamuchira mafoni, mameseji, kana notisi
Amazon & apos; s inobata panguva yakakodzera iyo Apple Watch yakaderedzwa yakaderera se $ 199
Maitiro ekuvhura iyo iPhone neApple Tarisa uchichengeta kumeso kwako
Samsung Galaxy Note 3 bhatiri bvunzo yehupenyu: chikara mune faux-dehwe zvipfeko
Waizviziva here: aya mafoni haatombove nekamera, uye nechikonzero chakanaka
Samsung Galaxy Tab S7 + vs Apple iPad Pro: akanakisa mapiritsi
Iyo iPad inotemerwa kuramba iri yechipiri chishandiso (kwerinenge rimwe gore)
iPhone 8 uye iPhone 8 Plus inouya nemabhatiri madiki, hukuru hunoratidzwa
Unogona kumisa iyo OnePlus 6T paVerizon, asi kumhanya kweLTE kunogona kunonoka kupfuura neT-Mobile
SQL Sarudza Chirevo